Garsooraha ugu caansan Premier League, Michael Oliver, wuxuu si ballaaran ula hadlay Daily Mail isagoo ka hadlay xirfadiisa, caawiyaha VAR iyo kooxda Premier League ee uu taageero oo aan loo ogoleyn inuu xukumo.
Oliver wuxuu sheegay inuu soo dhaweynayo adeegsiga VAR inkasta oo la dhaliilay, laakiin wuxuu xusay in hadii VAR la joojiyo, taageerayaasha isla markiiba ay dhahaan, “Haddii VAR la adeegsan lahaa, qaladkaas wuxuu noqon lahaa ciqaab.”
Isaga oo ka hadlaya kooxda Premier League ee uu taageero iyo kooxaha kale ee aanu xukumi karin xilli kasta, waxa uu yidhi:
Michael Oliver ayaa yidhi “Waligiis garsoore uma noqon doono kulamada Newcastle. Waa inaanu cadeyno kooxda aan taageerno ama hadii qof reerkaaga ka tirsan uu ka shaqeeyo koox. Kama qeyb geli kartid koox noocaas ah, mana noqon karo garsoore Sunderland sababo cad awgood
Sababta uusan garsoore ugu noqon karin Sunderland ayaa ah in Sunderland ay xafiiltan adag kala dhaxeyso Newcastle, sidaa darteed taageere Newcastle ah ma noqon karo garsoore kulamada koox cadaw ah.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi: “Newcastle inta badan waxa ay isku dhacsan yihiin sidii loo hubin lahaa in ay ku laabtaan heerka labaad, dabayaaqadii bishii Maarso iyo Abriil, waxay la macno tahay in garsoore aanu joogi karin xagga hoose.
“Haddii Newcastle ay u baahan tahay dhibic si ay u noolaato, kooxda ay u dagaallamayaan ayaa ka sarreysa Aston Villa, tusaale ahaan ma noqon karo garsoore kulanka Villa. Ma doonayo sidoo kale. Uma qalmo inaan silco
Michael Oliver, waa 11-jir garsoore ka ah Premier League, wuxuu sheegay inuusan u yeerin ciyaartooyda ugu caansan horyaalka lambarro la’aan, maadaama uusan dooneyn xiriir marka uu shaqada ku jiro.
“Waa xilli ciyaareedkeygii 11aad ee Premier League sidaa darteed qof walba wuu i garanayaa waana ogahay qof walba. Axad [maanta] Waxaan xukumaa kulanka Marine vs Spurs, waana wax layaableh inaan ku dhawaaqo ‘Maya 10’ markaan waco Harry Kane.
“Qof walba wuu garanayaa qofka uu yahay waxaanan garsoore ahaa dhowr sano. Marka maxaan ugu yeeri waayey Harry? Wuxuu iigu yeeraa ‘Michael’. Sababtoo ah markaad wada shaqeysaan waqti dheer oo aad xukuntid toddobo ama sideed xilli, waxaad xiriir la leedahay iyaga. Sababtoo ah wax badan baad arkeysaa.
“Waa inaad xirfadle noqotaa oo aad fahamtaa halka xariiqdu ku taal.”